30 taona an-tsehatra : Nampangoritsina ny fiarahan’i Rija tamin’ireo feo lafika 800 sy mpitendry 50 -
AccueilVaovao Samihafa30 taona an-tsehatra : Nampangoritsina ny fiarahan’i Rija tamin’ireo feo lafika 800 sy mpitendry 50
07/05/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tsara fisantarana. Fahombiazana ary nampangoritsina tanteraka ny fiarahan’i Rija Ramanantoanina sy ireo feo lafika 800 mahery ary mpitendry 50 tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Seho voalohany fisantarany ny fankalazana ny 30 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika sy niakarany teny an-tsehatra. Ho fisaorana an’Andriamanitra tamin’ny nahatrarany izany tsingerin-taona izany dia nosantariny tamin’ireo hira fiderana ny fankalazana, ka niangaliany ireo hirany miresaka ilay Nahary toa ny « Avy Aminao »… ary nindramany ihany koa sangan’asana mpanakanto hafa toa ny « Ry tompo » an’ny tarika Mahaleo…. Tafiditra tamin’izany ihany noa anefa ny « Ray Ô ! mba faniriako » izay nindramina avy amin’ny fihirana fanampiny, izay niangaliany tamin’ny endrika hafa niaraka tamin’ireo mpihira avy amin’ny antoko mpihira maro avy eto an-drenivohitra. Nandravaka ny nanome endrika hafa ireo hiran’i Rija Ramanantoanina ihany koa ireo zava-maneno samihafa toa ireo orkesitra niarahan’ireo mpitendry lokanga maro, ny zava-maneno tsofina…
Nitodika tamin’ny seza mena ny sehatra, ary tamin’ny toerana mifanohitra amin’izany no nisy ireo mpikambana avy amin’ny antoko mpihira maherin’ny 800, izay nisongadina avy hatrany tamin’ireo fanamiana fotsy nitovizan’izy ireo.
Tao anatin’ny fizarana faharoa kosa no niangalin’i Rija Ramanantoanina ireo hira nahafantarana azy toa ny « hay ve », « Hafatra », « Mila tsy »….